နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် TPS | USAHello မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များ | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရသူတို့တိုင်းပြည်ပြန်သွားဖို့အတှကျကမလုံခြုံသောကွောငျ့အခွားနိုငျငံမြားမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့်အခါနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြစ်ပါသည်. အချို့သောလူတွေသာလျှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင်ခိုလှုံခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါတယ်. ဆက်ဖတ်ရန်
သင့်ရဲ့ TPS သို့မဟုတ် DED ကုန်ဆုံးနေသည်? သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတင်းအချက်အလက် - ဇန်နဝါရီ updated 2020
ဤတွင်သတင်းအချက်အလက်များအမေရိကန်ကိုလာမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် updated ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Niloofar Rahmani, ဟောင်းတဦးအာဖဂန်လေတပ်ကပ္ပတိန် USA တွင်ခိုလှုံခွင့်ပေးအပ်ခဲ့Niloofar Rahmani, ဟောင်းတဦးအာဖဂန်လေတပ်ကပ္ပတိန်, USA တွင်ခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခဲ့သည်. Niloofar Rahmani အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးလေယာဉ်ပျံရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြီးမားသောအိပ်မက်တွေတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အမရေိစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြီးမားသောအိပ်မက်တွေတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. အမေရိက၏ United States ကိုလာမယ့်ငါ့အသက်ကို၌ကြီးစွာသောယခုအချိန်တွင်ခဲ့သည်. ငါပျော်ရွှင်ပြီးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သညျ။